Eksaody 19 - Ny Baiboly
21Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Midìna ka rarao mafy ny vahoaka tsy hihoatra ny faritra hankaty amin'ny Tompo mba hijery, fandrao hahafatesana maro izy. 22Na ny mpisorona manatona an'ny Tompo aza, aoka hanamasin-tena fandrao vonoin'ny Tompo. 23Dia hoy Moizy tamin Íaveh: Tsy hahazo miakatra ny tendrombohitra Sinaia ny vahoaka, satria efa voararanao mafy izahay nilazanao hoe: Asio faritra manodidina ny tendrombohitra, ka hamasino izy. 24Ary hoy Iaveh taminy: Mandehana midina aloha, izay vao miakatra indray hianao miaraka amin'i Aarona: fa ny mpisorona sy ny vahoaka, aoka tsy hihoatra ny faritra hiakatra hankaty amin'ny Tompo fandrao vonoiny. 25Dia nidina nankeo amin'ny vahoaka Moizy, nilaza izany. >